सरकारी वार्ता टोलि र डा केसी पक्षबीच आज वार्ता हुँदै, डा. के.सीले आज अनशन तोड्ने अपेक्षा - Vision Online News
सरकारी वार्ता टोलि र डा केसी पक्षबीच आज वार्ता हुँदै, डा. के.सीले आज अनशन तोड्ने अपेक्षा
भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित: २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ०५:१२ 116 पटक हेरिएको
सरकार र आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षबीच आज वार्ता हुने भएको छ । वार्ता आज अपराह्न चार बजेपछि गर्ने तयारी छ । हिजो सरकारी पक्ष र डा. के.सी दुबै पक्षले वार्ता टोलि गठन गरेको थियो । डा केसीको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक डा जीवन क्षेत्रीले आज सरकारी टोलीसँग वार्ता हुने बताएका हुन । सरकारले जति बजे, जहाँ बोलाउँछ, हामी त्यहीँ जान्छौं ।’ डा.के.सीका वार्ता संयोजक क्षेत्रीले बताए ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकमा दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सहभागी हुने कार्यक्रम रहेकाले त्यसपछि मात्रै वार्ता बस्ने तयारी गरिएको छ । डा. केसीले आमरण अनशन सुरु गरेको २४ औं दिनमा सरकारले बुधबार शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलिप शर्मा सदस्य छन् ।
सरकारले वार्ता टोली घोषणा गरेलगत्तै डा.केसी पक्षले पनि डा. जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, पूर्वअध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका बिभिन्न ६ बुँदे मागहरु राख्दै डा. केसीले गत २९ भदौदेखि जुम्लाबाट १९ औं अनशन सुरु गरेका थिए । उनलाई आठौं दिनमा काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनी हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कोठा नं. ५०१ मा छन् ।